Fuel Level Switch Manufacturers - China Fuel Level Switch Factory & Suppliers
Chinotsva Level Switch JT606
Chinotsva Level Switch JT606D
Chinotsva Level Switch JT606X
Chinotsva Level Switch JT550
Patented Product, Best Choice For Remote Fuel rinodyiwa Monitoring.
JT606 dzino mukuru nemazvo chinotsva pamwero Switch rakagadzirirwa kure akangwarira utariri mafuta rinodyiwa. Zvinonzi yakataurwa Jointech vakazvimiririra, zvikabatanidzwa pamusoro Switch michina panyika, uye ane nzira itsva patented ruzivo. Zvinogona vanoramba kuziva mvura pamwero dzakakwirira chisarudzo (<1mm), uyewo chinja kureba kuti aenderane Matangi mafuta akasiyana pamusoro pachivara, uye kutsiva yepakutanga motokari huni pamwero Switch kubatanidza chepakutanga mafuta mita.
Unique Design, achitungamirira Vachiwanzoreva
Maererano zhinji makore ruzivo panzvimbo yokugadza, kugara kuvandudzika, ichi vakwanise JT606 ane mano simba kuchinja zvakasiyana kwakatooma maindasitiri uye mugodhi ezvinhu.
Anogona kubviswa Fuel Switch aigona kubviswa maererano mafuta tangi kukura iri panzvimbo Usatambisa tolerances anokonzerwa chakaipa kukura
High-zvakarurama Recognition zvakarurama idukusa 1mm The Switch anogona kuziva chechetere kusiyana-siyana kwezvinhu zvishoma pane 1mm
Simple kugadzwa Patented zvakagadzirwa nyore vanomhanyisa flanges kuisa Switch hakudi mumwe gumi nevaviri makomba sikuruwa Press bhatani venguva uye chinhu calibration panzvimbo
Wide chiyamuro voltage, mukuru uye dunhu kudzivirira 4-70V paupamhi chiyamuro voltage siyana, iva nechokwadi chokuti Switch haisi pasi pokudzora mazano voltage. Multi redunhu inodzivirira, neizvi kubatana dziviriro, pfupi redunhu dziviriro.
Multi-chiratidzo goho Voltage goho (0-5V), ano goho (4-20mA) nemishonga goho (0-500Ω) Digital chiratidzo goho: RS232, RS485 Meet kure zvichiongororwa uye kuzvidzora achityaira motokari geji
Zvinopfuura Hardware, More Experience For Kugoverana
Jointech haasi huni pamwero chete Switch mugadziri, asi anopa huni zvichiongororwa mhinduro kuti oversea yeGmail.END_STRONG kwemakore akawanda. Jointech akaita vaunganidza akapfuma ruzivo panzvimbo yokugadza, Switch kusanganisa, musana pasi kubudiswa, uye mashoko kuongorora.
On nzvimbo chokugadza cherechedzo
The mudziyo kusangana ruzivo kugoverana
Mafuta zvinodyiwa Data ongororo uye neguhu goho ruzivo kugoverana
JT606 rinoshandiswa chaizvo dzakasiyana siyana nemotokari uye michina panyika.
Logistics zvokufambisa rori